Hel Caawinta Joojinta - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo » Hel Caawinaad Joojinta
Habab loo habeeyay oo jilicsan oo looga baxayo dadka deggan Vermont.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad u wanaajiso fursadahaaga inaad si guul leh uga joojiso sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah ama waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo. La shaqeynta Vermont Quit Partner ama Quitline Coach at 1-800-QUIT-NOW waxay kordhineysaa fursadahaaga inaad si guul leh u joojiso, gaar ahaan marka lagu daro daawooyinka joojinta. Taasi waa sababta barnaamij kasta oo joojiya uu u bixiyo BILAASH BILAASH, xanjo iyo lozenges waxayna kaa caawineysaa inaad dhisto qorshe hakin oo la joojiyay. Haddii aad isku dayday waddo hore oo aan shaqeyn, tixgeli inaad tijaabiso mid kale.
Markaad kafekerayso joojinta sigaar cabista, qiiqa ama tubaakada kale, miyaad isweydiineysaa nooca taageerada dheeraadka ah ee adiga kugu habboon Waa tan waxa aad ka filan karto nooc kasta oo ka mid ah caawimaad joojinta ah.
CAAWIMAAD CAAFIMAAD; Hada Isqor:
U wac si aad isu qorto
Uur ma leedahay mise hooyo cusub?
Hel caawimaad bilaash ah joojinta sigaar cabista iyo tubaakada kale adiga iyo ilmahaaga.
Hel Caawinaad Bilaash ah>